Kuva Shamwari Yakanaka Ushamwari Pahunenge Hwava Kuparara
NYAYA YEUPENYU Ndakabatsirwa Nekufamba Nevanhu Vakachenjera
Ipa Rukudzo Kune Vakakodzerwa Narwo
Ratidza Kutenda—Ita Zvisarudzo Nekuchenjera
Shumira Jehovha Nemwoyo Wakakwana!
Mwoyo Wako Uchabatsirwa Nezvinhu Zvakanyorwa Here?
Zita remuBhaibheri Pachirongo Chekare
Nharireyomurindi—Yekudzidza | March 2017
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Digor Douala Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Gianni naMaurizio vava nemakore anenge 50 vari shamwari. Asi pane imwe nguva, ushamwari hwavo hwakapotsa hwaparara. Maurizio anoti, “Pane imwe nguva zvinhu pazvakanga zvisiri kundifambira zvakanaka, ndakaita zvikanganiso zvakakura zvakaita kuti ushamwari hwedu huve zinyekenyeke.” Gianni anotiwo, “Maurizio ndiye akatanga kundidzidzisa Bhaibheri. Ndiye aindibatsira uye aindipa mazano mune zvekunamata. Saka handina kumbobvira ndafunga kuti aizoita zvaakaita. Ndakarwadziwa chaizvo nekuti ndaiziva kuti taisakwanisa kuramba tiri shamwari. Ndakanzwa sekuti ndakanga ndasiyiwa.”
SHAMWARI dzakanaka dzinokosha uye ushamwari hunogara haungoerekani hwavapo. Kana pakava nechinhu chinogona kuparadza ushamwari, zvii zvatingaita kuti hurambe huripo? Tinogona kudzidza zvakawanda kubva kuvanhu vanotaurwa muBhaibheri vaiva neushamwari hwechokwadi, asi hwakapotsa hwaparara.
SHAMWARI YAKO PAINOKANGANISA
Dhavhidhi, uyo aiva mambo uye aimbova mufudzi, aiva neshamwari dzakanaka. Imwe yeshamwari idzodzo yatingafunga nezvayo ndiJonatani. (1 Sam. 18:1) Asi Dhavhidhi aiva nedzimwe shamwari dzakadai samuprofita Natani. Bhaibheri haritaure pakatangira ushamwari hwavo. Zvisinei, pane imwe nguva Dhavhidhi akaudza Natani zvaiva pamwoyo pake sezvaungaita kushamwari yako. Dhavhidhi aida kuvakira Jehovha imba. Mambo anofanira kunge aikoshesa chaizvo zvaitaurwa naNatani seshamwari yake uye semurume aiva nemweya waJehovha.—2 Sam. 7:2, 3.
Kunyange zvakadaro, pane zvakaitika zvaigona kuparadza ushamwari hwavo. Mambo Dhavhidhi akaita upombwe naBhati-Sheba, uye akaurayisa murume wake, Uriya. (2 Sam. 11:2-21) Kwemakore akawanda, Dhavhidhi ainge akavimbika kuna Jehovha uye aiita zvakarurama. Asi akabva aita chivi ichi chakakura. Chii chakanga chaitika kuna mambo iyeye akanaka? Haana kuona here kuipa kwezvaakanga aita? Akafunga kuti aigona kuvanzira Mwari chivi chacho here?
Natani aizoita sei? Aizomirira kuti mumwe munhu ataure namambo nezvenyaya iyi here? Vamwe vaitoziva kuti Dhavhidhi ainge aronga sei kuti Uriya aurayiwe. Saka Natani aizodirei kupindira munyaya iyi yaigona kuparadza ushamwari hwavo hwemakore? Nyaya iyi yaigona kutoisa upenyu hwaNatani pangozi kudai akaitaura. Kana Dhavhidhi akaurayisa Uriya akanga asina mhosva, aizotadza nei kuurayisa Natani?
Asi Natani aiva mutauriri waMwari. Muprofita uyu aiziva kuti kana akaramba akanyarara, ushamwari hwake naDhavhidhi hwaizokanganisika uye hana yake yaizomutambudza. Shamwari yake Dhavhidhi, yainge yaita zvinhu zvisingadiwi naJehovha. Mambo aitoda kukurumidza kubatsirwa kuti adzoke mugwara. Dhavhidhi aitoda shamwari yechokwadi yaizomubudira pachena. Natani aiva shamwari yakadaro. Akasarudza kutaura nyaya yacho achishandisa mufananidzo waizobaya mwoyo wamambo uyu aimbova mufudzi. Natani akataura mashoko aMwari nenzira yakabatsira Dhavhidhi kuona kukura kwechivi chake uye yakamuita kuti apfidze.—2 Sam. 12:1-14.
Waizoita sei kudai waiva neshamwari yakaita chikanganiso kana kuti chivi chakakura? Pamwe ungafunga kuti kumuudza kuti akatadza kwaizoparadza ushamwari hwenyu. Kana kuti ungafunga kuti kuudza vakuru avo vanogona kumubatsira pane zvekunamata kunenge kuri kutengesa shamwari yako. Waizoita sei?
Gianni, ambotaurwa nezvake anoti, “Ndakaona kuti pane chakanga chachinja. Maurizio akanga ava kundivanzira zvimwe zvinhu. Ndakasarudza kutaura naye, kunyange zvazvo zvainge zvakandiomera. Ndainetseka kuti: ‘Ndingamuudza chii chaasingazivi? Ko kana akandigumbukira!’ Asi kuyeuka zvatakadzidza tese, kwakaita kuti ndiwane ushingi hwekutaura naye. Maurizio aimbotaurawo neni pandaida kubatsirwa. Ndaisada kuti ushamwari hwedu hupere, asi ndaida kumubatsira nekuti ndaimuda.”
Maurizio anowedzera kuti: “Gianni ainyatsoda kundibatsira uye aitaura chokwadi. Ndaiziva kuti zvaiitika kwandiri nemhaka yezvisarudzo zvakaipa zvandakaita yakanga isiri mhosva yake kana yaJehovha. Saka ndakabvuma chirango chandakapiwa nevakuru uye nekufamba kwenguva ndakasimbazve pakunamata.”
SHAMWARI YAKO PAINENGE IRI MUMATAMBUDZIKO
Dhavhidhi aivawo nedzimwe shamwari dzakaramba dzakavimbika kwaari zvinhu pazvakanga zvakamuomera. Imwe yeshamwari idzodzo yainzi Hushai, uyo anonzi neBhaibheri “shamwari yaDhavhidhi.” (2 Sam. 16:16; 1 Mak. 27:33) Anogona kunge aiva jinda uye shamwari yepedyo yamambo, yaimbotumwa kuita zvimwe zvinhu zvakavanzika.
Absaromu mwanakomana waDhavhidhi paakabvuta umambo, vaIsraeri vakawanda vakamutsigira asi Hushai haana kumboita izvozvo. Dhavhidhi paaitiza, Hushai akaenda kwaakanga ari. Dhavhidhi akarwadziwa chaizvo nekupandukirwa kwaakaitwa nemwanakomana wake nevamwewo vaaivimba navo. Zvisinei, Hushai akaramba akavimbika, uye akazvipira kuisa upenyu hwake pangozi kuti mazano airongwa naAbsaromu asabudirire. Hushai haana kungoita izvozvo nemhaka yekuti ndizvo zvaaifanira kuita sejinda. Akaratidza kuti aiva shamwari yakavimbika.—2 Sam. 15:13-17, 32-37; 16:15–17:16.
Zvinofadza kuti mazuva ano hama nehanzvadzi dzinoratidza kuti dzine ushamwari hwakasimba. Hadzingodaro nemhaka yekuti ndizvo zvadzinotarisirwa kuita muungano. Padzinobatsirana, dzinoita sedziri kuti: “Ndiri shamwari yako, kwete nekuti hapana zvekuzviita, asi nekuti wakakosha kwandiri.”
Izvi ndizvo zvakaitika kune imwe hama inonzi Federico. Achibatsirwa neshamwari yake yepedyo inonzi Antonio, akakwanisa kukunda dambudziko raakambosangana naro muupenyu. Federico anoti: “Antonio paakatamira muungano yedu, takabva tangova shamwari. Tese taiva vashumiri vanoshumira uye tainakidzwa nekushanda pamwe chete. Pasina nguva, akagadzwa kuva mukuru. Aiva shamwari yangu uye aiva muenzaniso wakanaka kwandiri panyaya dzekunamata.” Asi Federico akabva akaita chikanganiso. Akurumidza kutsvaka rubatsiro kuvakuru, asi akanga asingachakwanisi kuramba ari piyona uye mushumiri anoshumira. Antonio akaita sei nazvo?
Federico paakaita chikanganiso, shamwari yake Antonio yakanyatsomuteerera uye yakamukurudzira
Federico anoti: “Ndakaona kuti Antonio ainzwisisa kurwadziwa kwandaiitwa. Akaedza nepese paaigona napo kundibatsira kuti ndinzwe zviri nani. Aida chaizvo kuti ndigadzirise ushamwari hwangu naJehovha uye haana kumbondisiya. Akandikurudzira kuti nditangezve kuita mabasa ekunamata uye kuti ndisakanda mapfumo pasi.” Antonio anoti: “Ndaiita kuti tive nenguva yakawanda tiri tese naFederico. Ndaida kuti asununguke kundiudza chero zvaiva pamwoyo pake kunyange kurwadziwa kwaaiitwa.” Zvinofadza kuti Federico akazosimbazve pakunamata uye akazogadzwa zvakare kuva piyona uye mushumiri anoshumira. Antonio anopedzisa achiti: “Kunyange zvazvo tava kupinda neungano dzakasiyana, ushamwari hwedu hwasimba kupfuura nakare kwose.”
WAIZOONA SEWABATISWA DOMBO HERE?
Waizonzwa sei kana shamwari yako ikakusiya paunenge uchida kubatsirwa? Zvaizokurwadza zvikuru. Waizokwanisa kumuregerera here? Ushamwari hwenyu hwaigona kuzosimbazve sezvahwakanga hwakamboita here?
Funga zvakaitika kuna Jesu mazuva ake ekupedzisira ari panyika. Akanga aita nguva yakawanda aine vaapostora vake vakatendeka uye vakanga vava neushamwari hwakasimba. Jesu akatovati shamwari dzake. (Joh. 15:15) Asi chii chakaitika paakasungwa? Vaapostora vakamutiza. Petro akanga ataura pachena kuti aisazosiya Tenzi wake, asi usiku ihwohwo chaihwo, Petro akaramba kuti aiziva Jesu!—Mat. 26:31-33, 56, 69-75.
Jesu aiziva kuti aizosangana nemuedzo wake wekupedzisira ari ega. Kunyange zvakadaro, aiva nechikonzero chekugumbuka kana kutorwadziwa. Asi zvaakataura nevadzidzi vake mazuva mashomanana amutswa hazvitomboratidzi kuti ainge akavagumbukira. Jesu haana kuda kutanga kudonongodza zvese zvavakakanganisa kusanganisira zvavakaita usiku hwaakasungwa.
Pane kudaro, Jesu akanyaradza Petro nevamwe vadzidzi vake. Akaratidza kuti aivimba navo kuburikidza nekuvapa mirayiridzo yekuita basa rinokosha rekudzidzisa rati ramboitwa. Jesu akanga achiri kuona vaapostora ava seshamwari dzake. Vakaramba vachiyeuka rudo rwake. Vaizoedza kuita zvese zvavaigona kuti vasarasisa Tenzi wavo zvakare. Vakabudirira pakuita basa iro Jesu akasiyira vateveri vake.—Mab. 1:8; VaK. 1:23.
Imwe hanzvadzi inonzi Elvira inonyatsoyeuka payakambokanganisira shamwari yayo yepedyo inonzi Giuliana. Yakati: “Paakandiudza kuti zvandakanga ndaita zvakanga zvamurwadza, ndakanetseka. Aiva nechikonzero chekunditsamwira. Asi chakandishamisa ndechekuti aitonyanya kufunga nezvangu uye kuti zvandakanga ndaita zvaizoguma nei. Ndinoonga kuti haana kuisa pfungwa pane zvandakanga ndamutadzira asi pakuti ndakanga ndava kukanganisa upenyu hwangu. Ndakatenda Jehovha kuti ndaiva neshamwari yaisangofunga zvakainakira asi yaida kuti zvinhu zvindifambire zvakanaka.”
Saka shamwari yakanaka inoita sei kana ushamwari hwava kuda kuparara? Inofanira kuva nechido chekubudira mumwe wayo pachena pazvinenge zvakakodzera asi ichizviita nemutsa. Shamwari yakadaro inenge yakaita saNatani naHushai, avo vakaramba vakavimbika kunyange pazvainge zvakaoma, uye saJesu uyo aiva nechido chekuregerera. Uri shamwari yakadaro here?
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA March 2017